Alprostadil, (PGE1), တစ်ပြိုင်တည်းပဲ E1 (745-65-3) HPLC≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / Alprostadil, (PGE1), တစ်ပြိုင်တည်းပဲ E1
SKU: 745-65-3. အမျိုးအစား: အခြားသူများက
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ, (PGE1), Alprostadil ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူရှိတစ်ပြိုင်တည်းပဲ E1 (745-65-3) ။
တစ်ပြိုင်တည်းပဲ E1 (PGE1)လည်း alprostadil အဖြစ်လူသိများနေတဲ့ဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးပြုသည့်သဘာဝဖြစ်ပေါ် Prostaglands လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ မွေးရာပါနှလုံးချို့ယွင်းချက်နှင့်အတူကလေးငယ်မှာ, ခွဲစိတ်ထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်သည်အထိ ductus arteriosus ဖွင့်ရန်သွေးကြောသို့နှေးကွေးဆေးထိုးခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ urethra အတွက်လိင်တံသို့မဟုတ်နေရာချထားသို့ဆေးထိုးခြင်းအားဖြင့်, က erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကုသရန်အသုံးပြုသည်။
Alprostadil, (PGE1), တစ်ပြိုင်တည်းပဲ E1 ကဗီဒီယို
Alprostadil, (PGE1), တစ်ပြိုင်တည်းပဲ E1 အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Alprostadil, (PGE1), တစ်ပြိုင်တည်းပဲ E1
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 115-116 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်မှုကို Temp: -2 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ 8
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် Alprostadil, (PGE1), တစ်ပြိုင်တည်းပဲ E1 (745-65-3) အသုံးပြုမှု
Alprostadil, (PGE1), တစ်ပြိုင်တည်းပဲ E1 (CAS 745-65-3), အစ Avastin နဲ့ Mvasi တောင်းဆိုခဲ့သည်။
Alprostadil, (PGE1), တစ်ပြိုင်တည်းပဲ E1 အသုံးပြုမှု
သငျသညျ bevacizumab သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးထိုးလက်ခံရရှိရန်အဘို့အဒါဟာ 90 မိနစ်ကိုယူသင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးကဆရာဝန်သို့မဟုတ်သူနာပြုသင့်ခန္ဓာကိုယ် bevacizumab မှဓာတ်ပြုပြီးဘယ်လိုကြည့်ဖို့နီးကပ်စွာသင်ကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်။ သငျသညျ bevacizumab သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးထိုးလက်ခံရရှိသည့်အခါ Ifyou ကိုမဆိုအလေးအနက်ပြဿနာများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသင်ဆေးဝါးများ၏သင်၏ကျန်နေသောဆေးများ၏တစ်ဦးချင်းစီကိုလက်ခံရရှိရန်အဘို့အ, ကများသောအားဖြင့် 30 မိနစ် 60 ယူပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လို Alprostadil, (PGE1), တစ်ပြိုင်တည်းပဲ E1 (745-65-3) အကျင့်ကိုကျင့်
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ၏ကုသမှုများအတွက် alprostadil အဆိုပါ Corpus cavernosum ၏ချောမွေ့ကြွက်သားပြေစေပြီး, သို့သော်လုပ်ဆောင်ချက်အတိအကျယန္တရားမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာသက်ရောက်မှုသိသိ amp ၏ intracellular ပြင်းအားတိုးပွားလာမှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းပေါ်လာသည်။ Alprostadil ပရိုတိန်း kinase နှင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ချောမွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေ၏ activation မှဦးဆောင် adenylate cyclase လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် intracellular သိသိ amp ခြီးမွှောကြောင့်တိကျတဲ့အမြှေးပါး-ခညျြနှောငျ receptors နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်သိသိ amp ၏ oxidative phosphorylation ကမကထပြုခဲ့ inactivation ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့်ကြွက်သားကျုံ့ကာလအတွင်းကယ်လစီယမ်စည်းရုံးခြင်းနှောင့်ယှက်ရာ papaverine မတူဘဲ၌တည်ရှိ၏။ Alprostadil လည်း norepinephrine ၏အာရုံခံလွှတ်ပေးရန်ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့် norepinephrine ၏ vasoconstrictive လုပ်ရပ်များဆန့်ကျင်ဘက်ပြုနိုင်ပြီး nonadrenergic, noncholinergic ပြန်ပါတယ် neurotransmitters ၏လုပ်ရပ်များတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ ED ကုသခုနှစ်, alprostadil trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားလျှော့ပေါ့ခြင်းနှင့် cavernosal သွေးလွှတ်ကြောနဲ့သူတို့ရဲ့အကိုင်းအခက် dilating နေဖြင့်စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်သည်။ အဆိုပါ cavernosal သွေးလွှတ်ကြောများ၏ Dilation တိုးလာသည်သွေးလွှတ်ကြောဝင်ရောက်လာခဲ့သည်အလျင်နှင့်တိုးမြှင့်သွေးပြန်ကြောထွက်သွားခုခံခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ ရလဒ်အဖြစ်အဆိုပါ lacunar နေရာများတိုးချဲ့နှင့်သွေးဖြစ်လာသည့် Tunica albuginea ဆန့်ကျင် venules ၏ချုံ့ဖို့အလယ်တန်း entrapped ။ လုံလောက်သော tumescence နှင့်ကျောမှုအောင်မြင်ရန်ရန်, Tunica albuginea ကမထိုးဖောက်သည့် venules ချုံ့ဤသို့သွေးပြန်ကြောထွက်သွားပိတ်ဆို့ဖို့လုံလောက်ခိုင်မာသောဖြစ်ရမည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းတပ်ကြပ် veno-occlusive ယန္တရားအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ Alprostadil တိုက်ရိုက်သုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ်အော်ဂဇင်မထိခိုက်ပါဘူး။
ductus arteriosus-မှီခိုမွေးရာပါနှလုံးချွတ်ယွင်း၏ကုသမှုမှာတော့ alprostadil အဆိုပါ ductus arteriosus ၏ချောမွေ့ကြွက်သားလျှော့ပေါ့ခြင်းဖြင့် ductal patency ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အဆိုပါ ductus arteriosus ၏ခန္ဓာဗေဒပိတ်သိမ်းပြီးမြောက်ရန်ကြိုတင်ပေးထားလျှင် Alprostadil သာထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ cyanotic မွေးရာပါနှလုံးချို့ယွင်းချက်နှင့်အတူမွေးကင်းစကလေးမှ alprostadil (ကန့်သတ်အဆုတ်သွေးစီးဆင်းမှု) အဆုတ်သွေးစီးဆင်းမှုအတွက်တိုးလာအတွက်ရလဒ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် / သို့မဟုတ်သွေးလွှတ်ကြောအောက်စီဂျင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖိအား (PaO2) တွင်ယာယီတိုးမှဦးဆောင်ရသောစနစ်နှင့်အဆုတ်စောင်ရေအကြားရောနှောတိုးပွါး နှင့်အောက်စီဂျင်ရွှဲ။ alprostadil ကုထုံးဖို့ cyanotic မွေးကင်းစကလေးများ၏တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းပြောင်းပြန် PO2 pretreatment နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးမြတ်ဆုံးတုံ့ပြန်မှု ductus arteriosus ကျဉ်းမြောင်းနိမ့် pretreatment PaO2 (<20 တောရက်စ်) နဲ့ရှိသူများမွေးကင်းစကလေး၌ဖြစ်ပေါ်နှင့်အဟောင်းသို့မဟုတ်အငယ်4ရက်ပေါင်းတဲ့သူရှိပါတယ်။2တောရက်စ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏ PaO40 တန်ဖိုးများနှင့်အတူမွေးကင်းစကလေးအများအားဖြင့် alprostadil အနည်းငယ်သာတုံ့ပြန်မှုရှိသည်။
ကန့်သတ်စနစ်တကျသွေးစီးဆင်းမှုနှင့်အတူမွေးကင်းစကလေး၌, alprostadil ၏အုပ်ချုပ်မှုတိုးချဲ့စနစ်တကျသွေးပေါင်ချိန်နှင့်အတူနှလုံး output ကိုတိုးမြှင့်, acidemia ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးသို့မဟုတ်ဆုံးမခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်, femoral သွေးခုန်နှုန်းအသံအတိုးအကျယ်တိုးတက်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာသွေးစီးဆင်းမှုနဲ့ function ကိုတိုးတက် aortic အသွေးတော်ဖိအားတက်မှဆင်း သက်. ၏ gradient ကိုလျော့နည်းသွား (ထို aorta ၏ coarctation နှင့်အတူမွေးကင်းစကလေး၌) နှင့် / သို့မဟုတ် (ထို aortic မဟာ၏ပြတ်တောက်နှင့်အတူမွေးကင်းစကလေး၌) aortic ဖိအားဆင်းဖို့အဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောဖိအားအချိုးလျော့နည်းသွားသည်။ cyanotic မွေးကင်းစကလေးအတွက်မတူဘဲ, acyanotic မွေးကင်းစကလေးအတွက် alprostadil များ၏ထိရောက်မှုအသက်အရွယ်သို့မဟုတ် pretreatment PaO2 အပေါ်မူတည်မထားဘူး။
Alprostadil (Prostglandin E1) အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ကုသရန်အသုံးပြုသည်။ ED ကုသ alprostadil များ၏ထိရောက်မှုအကြောင်းရင်းနှင့်အတူကွဲပြား; တုန့်ပြန်မှုနှုန်းကြောင့်• Neurogenic disease အာရုံကြော, psychogenic, ဒါမှမဟုတ် vasculogenic အကြောင်းတရားများမှ ED နှင့်အတူသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်မှုကြောင့်ရောထွေး etiologies မှ ED နှင့်အတူလူနာအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်နိမ့်သည်။ အဆိုပါ urethra နှင့်တိုက်ရိုက် Corpus cavernosa သို့ထိုးသွင်းကြောင်းဆေးထိုး (Caverject သို့မဟုတ် Edex) သို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဆေးတောင့်ကိုအသုံးပြုသည့် transurethral ထုတ်ကုန် (မူဆယ်): နှစ်ဦးကိုသောက်သုံးသောပုံစံများ ED ကုသမှုအတွက်စျေးကွက်နေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလိမ်းဂျယ်လ်များနှင့် non-ထိုးဖောက် liposomal ပေးပို့မှုစနစ်ကဲ့သို့သောအခြားသောက်သုံးသောပုံစံများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအောက်မှာရှိပါတယ်။ ED ကုသမှုလမ်းညွှန်ချက်များအရ, ပါးစပ် phosphodiesterase type ကို5inhibitors (PDE5 inhibitor) ပထမဦးဆုံးလိုင်းကုထုံးစဉ်းစားနေကြသည်။ ဒုတိယအ-line ကိုကုသမှုရွေးချယ်စရာ intracavernous ဆေးထိုးခြင်းနှင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် urethral ကုထုံးများပါဝင်သည်။ Intracavernous ဆေးထိုးကုထုံးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူပညာရေးများအတွက်အထိရောက်ဆုံး nonsurgical ကုသမှုဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ priapism နှင့် penile fibrosis အပါအဝင်ထိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ပိုးစားမှတ်သားလောက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း FDA ကခွင့်ပြုချက်နေသောခေါင်းစဉ်: ဇူလိုင်လ 1995 အတွက် Caverject, အောက်တိုဘာလ 1996 အတွက်မူဆယ်နှင့်ဇွန်လ 1997 အတွက် Edex ။
Alprostadil နှင့်အီးစီးရီးထဲမှာကတခြားတစ်ပြိုင်တည်းပဲသဘာဝအတိုင်းသန္ဓေသား၏အချင်းနှင့် ductus arteriosus အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ သွေးကြောချောမွေ့ကြွက်သားတိုက်ရိုက်အပန်းဖြေခြင်းဖြင့် E-type ကိုတစ်ပြိုင်တည်းပဲ vasodilate arterioles ။ အခြားအ pharmacologic သက်ရောက်မှုနှလုံး output ကိုတိုး, စနစ်တကျနှင့်အဆုတ်နှစ်ဦးစလုံးရေယာဉ်များ၏ dilation, အ ductus arteriosus ၏ dilation, platelet စုစည်းမှု၏တားစီး, bronchial ကြွက်သားများအပန်းဖြေ, ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာသွေးစီးဆင်းမှုတိုးနှင့်အစာအိမ်အချည်းနှီးသောအချိန်နှောင့်နှေးပါဝင်သည်။ သွေးကြောသွင်း alprostadil မှန်ကန်သောသို့မဟုတ် palliative ခွဲစိတ်၏အချိန်အထိ ductus arteriosus တက်၏ patency ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ညာဘက်သို့မဟုတ်လက်ဝဲ ventricular ထွက်သွား၏အဆီးအတားနှင့်အတူမွေးကင်းစကလေးအတွက်အသုံးပြုသည်။ Alprostadil ယေဘုယျအားဖြင့်အနိမ့် pretreatment အသွေးတော် PO2 သူဟောင်းကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း4ရက်ပေါင်းများမှာရှိသူများမွေးကင်းစကလေးတွင်ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။4ရက်ပေါင်းထက်အသက်ကြီးတဲ့မွေးကင်းစကလေး၌, ductus arteriosus ၏နံရံများတွင် postnatal involutional အပြောင်းအလဲများကြောင့် ductal ချောမွေ့ကြွက်သား reactivity ကိုတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းလည်းမရှိ။ အသက်ရှူကျပ်မွေးကင်းစကလေး၏ 10-12% အတွက်ဖွံ့ဖြိုးသောကွောငျ့သွေးကြောသွင်း alprostadil အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးလိုအပ်သည်။ Alprostadil FDA ကမွေးကင်းစကလေးအဖြစ်ငယ်ရွယ်အဖြစ်ကလေးလူနာအတွက်အတည်ပြုသည်။ Prostin VR ကလေး 1981 အတွက် FDA ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
AASraw ထံမှ Alprostadil, (PGE1), တစ်ပြိုင်တည်းပဲ E1 ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
Canrenone အမှုန့် (976-71-6)